मत्ती १९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना प्रेषित रोमी १ कोरिन्थी २ कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १ थिस्सलोनिकी २ थिस्सलोनिकी १ तिमोथी २ तिमोथी तीतस फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस २ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाश १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८
१९ यी कुरा भनिसकेपछि येशू गालीलबाट जानुभयो र यर्दन नदी पार गरेर यहूदियाको सीमावर्ती इलाकाहरूतिर पुग्नुभयो। २ अनि भीडका भीड मानिसहरू उहाँको पछि लागे र उहाँले त्यहाँ तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। ३ तब फरिसीहरू उहाँकहाँ आए र उहाँको परीक्षा गर्ने मनसायले यस्तो प्रश्न गरे: “एक जना पुरुषले जुनसुकै कारण देखाएर आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्नु के ठीक हो?” ४ उहाँले जवाफ दिनुभयो: “के तिमीहरूले पढेका छैनौ, जसले मानिस सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले सुरुदेखि नै नर र नारी बनाउनुभयो ५ र भन्नुभयो: ‘यसैकारण पुरुषले आफ्ना बुबा र आमालाई छोड्नेछ अनि आफ्नी पत्नीसित बस्नेछ* र ती दुई एउटै शरीर हुनेछन्‌’? ६ त्यसैले अब तिनीहरू दुई होइनन्‌ तर एउटै शरीर हुन्‌। त्यसकारण, जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुभएको* छ, त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्टयाओस्।” ७ तिनीहरूले उहाँलाई भने: “त्यसोभए मोशाले किन छोडपत्र दिएर तिनीसित सम्बन्धविच्छेद गर्ने आज्ञा दिए त?” ८ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरूको मन कठोर भएकोले मोशाले तिमीहरूलाई आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्ने छुट दिएका हुन्‌ तर सुरुदेखि त यस्तो थिएन। ९ म तिमीहरूलाई भन्छु, जसले अवैध यौनसम्बन्धबाहेक* अन्य कारणले आफ्नी पत्नीसित सम्बन्धविच्छेद गर्छ र अर्कीसित विवाह गर्छ, उसले परस्त्रीसित यौनसम्बन्ध राखेको ठहरिन्छ।” १० चेलाहरूले उहाँलाई भने: “पति-पत्नीको सम्बन्ध यस्तै हुने हो भने त विवाह नगर्नु नै बेस रहेछ।” ११ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “सबैले त यो वचनअनुसार गर्न सक्दैनन्‌ तर तिनीहरूले मात्र, जसले यो वरदान पाएका छन्‌। १२ किनकि कतिचाहिं आमाको गर्भदेखि नै नपुंसक भएर जन्मिएका हुन्छन्‌, कतिलाई चाहिं मानिसहरूले नपुंसक बनाइदिएका हुन्छन्‌ अनि कतिचाहिं यस्ता नपुंसकहरू हुन्छन्‌, जसले स्वर्गको राज्यको खातिर आफूलाई नपुंसक बनाएका हुन्छन्‌। जो अविवाहित रहन सक्छ, त्यो अविवाहित नै रहोस्।” १३ तब उहाँले आफ्नो हात राखेर प्रार्थना गरिदिऊन्‌ भनी तिनीहरूले साना केटाकेटीहरूलाई उहाँकहाँ ल्याए तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हप्काए। १४ तर येशूले यसो भन्नुभयो: “साना केटाकेटीहरूलाई आउन देओ, तिनीहरूलाई मकहाँ आउनदेखि नरोक, किनकि स्वर्गको राज्य यिनीहरूजस्ताकै हो।” १५ अनि उहाँले तिनीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नुभयो र त्यसपछि त्यहाँबाट जानुभयो। १६ तब हेर, एक जना जवान मानिस उहाँकहाँ आएर सोध्यो: “हे गुरु, अनन्त जीवन पाउन मैले के असल काम गर्नुपर्छ?” १७ उहाँले उसलाई भन्नुभयो: “असल के हो भनी तिमी मलाई किन सोध्छौ? असल त एक जना मात्र हुनुहुन्छ। तर यदि तिमी जीवन पाउन चाहन्छौ भने आज्ञाहरू पालन गर्न नछोड।” १८ उसले उहाँलाई भन्यो: “कुन-कुन?” येशूले भन्नुभयो: “यही कि तिमीले हत्या नगर्नू, तिमीले आफ्नो पति वा पत्नीबाहेक अरूसित यौनसम्बन्ध नराख्नू, तिमीले नचोर्नू, तिमीले झूटो साक्षी नदिनू, १९ तिमीले आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू र तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नू।” २० त्यस जवान मानिसले उहाँलाई भन्यो: “यी सब त मैले पालन गर्दै आएको छु; त्यसोभए ममा के कमी छ?” २१ येशूले उसलाई भन्नुभयो: “तिमी पूर्ण हुन चाहन्छौ भने जाऊ र आफ्नो जायजेथा बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। तब तिमीले स्वर्गमा धनसम्पत्ति पाउनेछौ अनि आएर मेरो पछि लाग।” २२ यो सुनेर त्यो जवान मानिस दुःखी हुँदै आफ्नो बाटो लाग्यो, किनकि ऊसित धेरै धनसम्पत्ति थियो। २३ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, धनी मानिसलाई स्वर्गको राज्यमा पस्न कठिन हुनेछ। २४ फेरि म तिमीहरूलाई भन्छु, धनी मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नभन्दा त उँटलाई सियोको नाथ्रीबाट छिर्न नै सजिलो हुन्छ।” २५ जब चेलाहरूले यो सुने, तब असाध्यै छक्क पर्दै तिनीहरूले सोधे: “त्यसोभए के कसैले उद्धार पाउन सक्ला त?” २६ सीधै तिनीहरूको अनुहारमा हेरेर येशूले भन्नुभयो: “मानिसहरूको तर्फबाट यो असम्भव छ तर परमेश्वरको तर्फबाट भने सबै कुरा सम्भव छ।” २७ तब पत्रुसले उहाँलाई भने: “हेर्नुहोस्! सबै कुरा छोडेर हामी तपाईंको पछि लागेका छौं। त्यसोभए हामीले के पाउनेछौं त?” २८ येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, पुनःसृष्टिको बेला, जब मानिसको छोरा आफ्नो गौरवशाली सिंहासनमा बस्नेछ, तब तिमीहरू जो मेरो पछि लागेका छौ, तिमीहरू पनि बाह्र सिंहासनमा बसेर इस्राएलका बाह्र कुलको इन्साफ गर्नेछौ। २९ जसले मेरो नामको कारण घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा बुबा वा आमा वा छोराछोरी वा जग्गा-जमिन छोड्छ, उसले कैयौं गुणा यी कुरा र अनन्त जीवन पाउनेछ। ३० “तर धेरै जना जो पहिला छन्‌, ती पछिल्ला हुनेछन्‌ र जो पछिल्ला छन्‌, ती पहिला हुनेछन्‌।
^ मत्ती १९:५ * यहाँ चलाइएको ग्रीक शब्दले गमले टाँसेजस्तै बलियोसित टाँसिनुलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती १९:६ * शाब्दिक, “नार्नुभएको।”
^ मत्ती १९:९ * अतिरिक्त लेख ४ हेर्नुहोस्।